Gbasara Anyị - Haidari Mma Technology Co., Ltd.
Nabata Iji kpọtụrụ Anyị!
N'ịbụ onye guzosiri ike na 2014, Haidari Beauty Technology (Beijing) Co., Ltd bụ onye nrụpụta ọkachamara na-elekwasị anya na nyocha na ịmịpụta ngwa ọrụ laser na Aesthetic laser na igwe mmepụta ihe na China.
Haidari Mma na-enye CO2 fractional laser (ọgwụgwọ ikpu na valvụ, ịkpụgharị anụ ahụ, nlọghachi anụ), Picosecond laser, Erbium laser (1550nm, 2940nm), igwe slimming laser, igwe nhichapụ laser 808nm, igwe akara, wdg.
Haidari Mma na-enyekwa ọrụ OEM na ODM dabere na ọchịchọ ndị ahịa.
Dị ka Mma Haidari dị ka akụkụ nke azụmahịa gị, ị nwere ike ịkwalite ma nye ndị ahịa gị ike ịkwalite ịma mma ha ma melite ogo ndụ ha site na ọgwụgwọ dị mma, nke a na-ahụ anya na nke ọma.
Kemgbe e guzobere ya, ụlọ ọrụ a na-agbaso ụkpụrụ anọ nke "àgwà mbụ", "onye ahịa mbụ", "ọrụ mbụ" na "aha mbụ". Anyị na-atụ anya ọnụnọ gị na imekọ ihe ọnụ, na-eme ka nkwonkwo mgbalị maka laser na China na mba ụlọ ọrụ.
The ụlọ ọrụ nwere otu ìgwè nke elu larịị electronic, ngwa anya na nkenke ígwè ọkachamara nnyocha na mmepe pesonel, na mba elu ji atụ ngwá, mma oru oma mmepụta usoro na nlezianya mma management usoro, iji hụ na àgwà nke anyị na.
Ike oru otu
Anyị nwere ike oru otu na ụlọ ọrụ, ọtụtụ iri afọ nke ọkachamara ahụmahụ, magburu onwe imewe larịị, na-eke a elu-edu elu-arụmọrụ smartequ tsare.
The ụlọ ọrụ specializes na-amị elu-arụmọrụ akụrụngwa, ike oru ike, ike mmepe ike, ezi oru ọrụ
Ngwaahịa anyị nwere ezigbo mma yana kredit ịhapụ anyị ka anyị nwee ike ịhazi ọtụtụ ngalaba ụlọ ọrụ na ndị na - ekesa ihe na mba anyị.
Ma ọ bụ ire ere ma ọ bụ azụ ahịa, anyị ga-enye gị ọrụ kachasị mma iji mee ka ị mara ma jiri ngwaahịa anyị ngwa ngwa.